Lapho Ukuze Thola Europe Iningi Ezinhle Architecture | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Lapho Ukuze Thola Europe Iningi Ezinhle Architecture
Ufuna ukubona ezinye izakhiwo oncomekayo eholidini wakho olandelayo? Uma kunjalo, kukhona cishe ayikho indawo ungcono Europe ngawe. Noma ngabe abanesifiso classical izakhiwo izitayela noma enethemba lokuvuselela ukuthola ezinye iimsebenzi eyaziwa kancani amagugu, amadolobha aseYurophu uke ehlanganiswa. Ake bheka ezinye izibonelo Umklamo omuhle futhi lapho ukubona konke:
Architecture Ezinhle: Italy
Italy ugcwele emadolobheni nasemadolobheni amancane lapho ungakwazi ulahleke abagcina izakhiwo amahle. Noma ngabe use- Rome noma ku-Florence, cishe kuwo wonke amagumbi kuwufanele isithombe. Izivakashi ngifuna emadolobheni amancane langa, Vicenza ilungelo uya khona. It sika eduze uma ungumuntu ukuthatha Isitimela noma Venice, okuyinto naye kuwufanele Ngokuvakasha. Nakuba Vincenza is owayedume yayo Renaissance izakhiwo isitayela zicatshangwe umqondo Andrea Palladio, ngokuvamile izakhiwo Venetian kuyinto Gothic, nezinhlu amahle.
Phakathi kwezinye emadolobheni Italian awukwazi miss, Rome noFlorence futhi kugqame njengoba izintandokazi. Rome ngokuyinhloko egcwele sezakhiwo wonke umuntu kufanele ubone kanye esikhathini esithile ekuphileni kwabo. waseColosseum, St. KaPetru Basilica, Onkulunkulu futhi di UMthombo umthombo konkhe kubalulekile ukuvakasha. Ngokolunye uhlangothi, Florence has inhlanganisela izitayela ezahlukene, ephawuleka kakhulu yamaGreki asendulo futhi izakhiwo Roman, Gothic kanye Renaissance.
Architecture Ezinhle: France
France siyikhaya kuya emadolobheni ambalwa nge ezihlukahlukene izitayela eyoshiya iyiphi Ezinhle Architecture lover waphefumula kanzima. Phakathi abazobhapathizwa esiyinhloko ukuvakashelwa, Strasbourg, Bordeaux kanye Paris Cishe ukunikela kakhulu.
Kuningi ukubona futhi ukwenza eStrasbourg, kuhlanganise izibonelo abalulekile bokwakha Gothic, zithandelana izifunda yesimanje kanye postmodern kanye izakhiwo Alsatian. Bordeaux uhlukile futhi. I idolobha elikhulu kunawo wonke Aquitaine esifundeni inama zone ezisemadolobheni fabulous wangekhulu le-18, Palace of the Bourse, kanye Cathedral Saint-Andre. Ekugcineni, Paris idume njengoba omunye birthplaces bokwakha Gothic, kodwa futhi unothile izibonelo ezahlukene Belle Epoque futhi art entsha.
Kukhona inala amagugu yezakhiwo okutholakala Germany. Nokho, ezimbili labo umxhwele kakhulu kukhona Berlin futhi Rothenburg. Architecture ngokuvamile kuhambisana ne umlando, futhi ungabona lokhu uxhumano ngokucacile Berlin. Umuzi ibilokhu ihlukaniswe kanye, futhi lokho kuyabonakala kwezinye izindawo. Lokho kwenza kube nendawo enkulu nakho izakhi ezahlukene izakhiwo yehle ezijulile zomlando amathonya yobuciko.
Ngokolunye uhlangothi, Rothenburg iyindawo kokubukeka njenge-ke weza ngqó aphume a lwasemaphusheni. Lokhu ukuwozela, medieval ezibukeka edolobheni kuyinto izivakashi ozithandayo. Kuyinto isibonelo esivelele nenhle European bokwakhiwa ephakathi ne edolobheni layo izindonga ezinophahla olungunxantathu uphahla.
Stuttgart ukuze Rothenburg Izitimela
ENuremberg ukuze Rothenburg Izitimela
Europe kuwufanele enqamula, futhi kukhona nezinye izindawo eziningi ezinhle ukuthi kufanele silwele ukungabheki ukungafani vakashela. Umklamo omuhle ugcwele England, Belgium, Austria, Sweden, kanye Netherlands kanjalo.
Uma usukulungele ukubhuka amathikithi akho isitimela ngenxa izakhiwo emehlweni ayakubona uhambo amaphupho akho, ukumbheka izindawo zakho nge Londoloza zemininingwane.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/magnificent-architecture/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Izakhiwo travelfrance travelgermany travelitaly